Phumelela enkulu Starmania xa izigidi neenkwenkwezi ndilinde wena spin. Lo matshini kumangalisayo isihloko wawumbejembeje lobuqaqawuli neenkwenkwezi eziya kwenza kuwa eluthandweni nayo. Sinako kuphela kuphupha kokufikelela iinkwenkwezi, kodwa lo mdlalo uzisa kuwe, kwi izikrini zakho kuphela Slot Top. Ukuba umntu axhamle ubuhle isibhakabhaka ebusuku, ngoko lo mdlalo Lulungiselelwe wena. Kuphela ke yemizobo yale umdlalo omhle, kwa ne izinga imbuyekezo eliphezulu ngaphezu 95%!
Ukuba ucinga luck wakho egameni lakho, ngoko zama phezu ngokuthi ujikeleza apha! Beka ibhanti lakho njengoko ibhajethi yakho ukuze ubutyebi yakho ithethe ngokwayo. Xa ufumana intlanganisela iinkwenkwezi ezintathu okanye ngaphezulu, oko neba. Kodwa ukuba nje waphumelela esisiseko. Kule 5 namacwecwe kunye 3 imigca umdlalo, ithamsanqa yakho isezandleni 6 iinkwenkwezi bakhazimla. Kodwa ke adakasa kunye Uchithachitha ukuba kufuneka izinto ngcono nalibekelwayo.
Iinkwenkwezi zibonisa ithamsanqa lakho kakuhle Starmania!
Umdlali bet nantoni na evela 0.10 ukuze 20.00 iikhredithi. kunye 10 paylines zonke, le lokuwina zithathwa zombini iindlela - ekhohlo ukuya ekunene kwaye ekunene ukuya ekhohlo. Jackpot kuxa 5 iinkwenkwezi ezinkulu ebomvu eziphezu slot idibanise ngokuphumelela, enikela nonkonkonko 500 ngamaxesha ubhejo. Nokuba emva koko, umdlali ungakhetha ukuba ukungcakaza waphumelela.
Uya kwazi iinkwenkwezi zakho unethamsanqa apha!
Uphawu zasendle livela kwi namacwecwe 2, 3 kwaye 4 kuphela, kwaye Ungatshintsha zonke iinkwenkwezi ngaphandle isimboli usichithachithe. Uphawu usichithachithe luphawu eyanelisa gqitha somdlalo. Kunye kangangoko 200 ngamaxesha ukubheja kwakho ukuba kuphumelela, oko kunika kwakhona phandle 10 aziyeki ivideo. Ke zonke spin ezamahala, kukho wasendle noqhotyosho ecaleni. Amaqokobhe enathi, isibuko ukuphumelela enkulu ufumana phezulu kuphela.
Kubhaliwe ogama Star-phithi isizathu! Ezinikeleyo lonke ungcakazo-maniacs, lo mdlalo yenye koomatshini ambalwa basivuza kakhulu. Kulula ukuba badlale yaye baqonde, akukho rounds ibhonasi inzima kule omnye. Umxholo wahlukile kwaye amehlo awayeno-, akukho ulalanise ukonwabisa, yaye abadlali iza kumenza kubabetha xa beyeka keleza kwi Starmania!